ALAKAMISY 28 AVRILY - ALAROBIA 4 MAY 2022
HOPITALIBE TOAMASINA : Renim-pianakaviana niteraka kamban-telo
Ny marainan’ny alakamisy 7 febroary lasa teo iny no teraka tao amin’ny hopitaliben’i Toamasina ireto zaza kambana telo mianadahy ireto : roa tamin’izy ireo no lahy ary iray kosa dia vavikely. 15 février 2013
Ity farany no nivoaka voalohany, dia i Fenomanampionina Jocelyne, milanja 2 kg 200 g, nanaraka azy taoran’izany, Mihamanjakamanana, lahikely, milanja 2 kg 400, ary ny fahatelo dia Miha Soatalily, lahikely, milanja 1 kg sy 750 g. Zaza faha-efatra naterak’izy mivady. Valafeno sy Volombosy no ray aman-drenin’ireto kambana telo ireto.
Teraka ara-dalàna, tsy nandalo fandidiana ity renim-pianakaviana ity ary salama tsara izy efa-mianaka saingy mbola arahi-maso akaiky ny fahasalaman’izy ireo ao amin’ny Pédiatrie-hopitalibe amin’izao fotoana.
Noho ny fahasahiranana misy amin’ireto ray aman-drenin’ny izy telo mianadahy kely kambana telo ireto dia mangataka izay anjara fanampiana avy amin’ny malala-tanana sy izay tsara sitrapo eto Toamasina sy manerana ny Nosy izy ireo, indrindra ny fanampiana avy amin’ny fitondram-panjakana Malagasy. Mbola nanamafy io fangatahana io ihany i Mahateke, filohan’ny Foko Antandroy misy ny ray aman-drenin’ny zaza ireto ho an’ny « longo iaby » monina eto Toamasina, mba hitondra izay foy hanampiana azy telo mianadahy ireto. Nohazavain’ity filohan’ny Foko Antandroy ity ihany koa ny dikan-teny hoe « Miha », izay mitondra ny anaran’ireto lahikely ireto. « Anarana entin’ny vintan’andro nahaterahana amin’ny Antandroy io « Miha » io », hoy izy. Nohamafisiny fa efa fantatra dieny eo am-piterahana ny vintana entin’ny zaza rahatrizay.